Iindaba zeshishini - Page 1
Kwimoto yokuhlanjululwa kwemoto
Isixhobo Power zeplastiki ngumngundo
Yorhwebo Plastic Umngundo
Iibhotile zeplastikhi ezahlukahlukeneyo
Ubuhle boKhathalelo lwaBantu bePlastiki
Ikhompyuter kunye neemveliso zepheripher ukungunda
Smart ukungunda zeplastiki ekhaya
Isixhobo sekhaya sePlastiki
Ikhaya > Iindaba > Iindaba zeshishini
Nguwuphi umgaqo na ziphene yokubumba ekusebenzeni zeplastiki sokubumbela?
Ndiyakholelwa ukuba abahlobo abaninzi ababandakanyekayo kushishino sokubumbela abazi ukuba kuqhubeka ntoni ekubumbeni ngenaliti yeplastikhi, ngoku ukutyebisa ulwazi loontanga bakho ekubumbeni!
Intshayelelo kwimveliso yeplastiki yekhaya
Iiplastikhi yimixube yepolymer, eyaziwa ngokuba ziiplastikhi okanye ii-resin, ezifakwe ipolymer ngokudityaniswa okanye ukuncitshiswa kwee-monomers njengezinto ezisetyenzisiweyo. Banokutshintsha ngokukhululekileyo ukwakheka kunye nemilo.
Izinto ezifunekayo ekwenziweni komngundo weplastiki osetyenziselwa umzi
PP yesiqhelo isoloko isetyenziselwa umngundo inaliti idyasi ixhome, izitulo, ilindle, imigqomo, izitya, iithoyi, izinto zokubhala, izinto zeofisi, ifenitshala, iihenjisi, iibhokisi zengeniso njalo njalo. Ukufakwa kwifriji, igobolondo lezixhobo ezincinci zasekhaya, njl.
Intshayelelo PC iimveliso zeplastiki
Ikakhulu kusetyenziswa kushishino ibandla iglasi, ishishini imoto kunye elektroniki, ishishini zombane, kulandele amalungu oomatshini mveliso, CD, ukupakisha, ikhompyutha kunye nezinye izixhobo ofisi, unyango kunye nonyango lwezempilo, umboniso, ulonwabo kunye nezixhobo zokhuselo.
Idilesi: Ummandla A, 1 Kumgangatho wokuqala, Nombolo 6, kwindlela yaseRoma 3rd Street, kwilali yaseRoma, Qingxi Town, Dongguan City
@Copyright 2019-2020 Dongguan Raofeng Plastic Products Co, Ltd.Ukuthengiswa kweShishini: